Samachar Batika || News from Nepal » पाचन प्रणाली कमजोर हुनबाट बच्न यी ६ उपायहरु
पाचन प्रणाली कमजोर हुनबाट बच्न यी ६ उपायहरु
हामीले जे जति खान्छौ, सबैकुरा प’चाउन गा’ह्रो हुन्छ । कतिको पचाउने क्षमता त एकदमै क’मजोर हुन्छ । उनीहरुको पेटमा कुनै न कुनै समस्या हुन्छ । यस्तो व्यक्तिको अनुहार पनि रु’खो, जि’र्ण र फिका देखिन्छ ।
जानेर होस् वा अन्जानमा हामीले खाएका कतिपय खानेकुरा शरीरलाई पचाउन ग्राहो भएको हुन्छ । अर्थात हाम्रो पाचन प्रणालीले सबै प्रकारका खानेकुरा प’चाउन सक्दैन । तर यसो हुनुमा कतिपय अवस्थामा पचाउने क्षमता कमजोर हुनु पनि हो ।अर्थात खानेकुराका कारण पाचन प्रणालीमा समेत समस्या हुने गर्दछ । तसर्थ शरीर स्वस्थ्य बनाउन प्राचन प्रणाली ठिक हुन जरुरी छ ।त्यसैले स्वस्थ्य बन्न होस् वा सुन्दर बन्न, पेट सफा हुनुपर्छ । पाचन क्षमता बलियो बनाउन निम्न कुरा त्याग्नु पर्दछ ।
पाचन क्षमता बलियो हुनुपर्छ । तर, कसरी ?
१. साह्रो वा काचो नखानुहोस्
केहि मानिस सारो र काचो खाना खान रुचाउँछन् । तर यसलाई पचाउन हाम्रो पाचन प्रणालीलाई निकै बल पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा अदुवाको एक टुक्रालाई कागतीको रसमा मिसाई पिएमा जस्तै साह्रो भोजन पनि पच्ने गर्दछ ।
२. चिसो पेय नपिउनुहोस्
केहि मानिसमा चिसो पेय पर्दाथ अर्थात कोल्ड ड्रिंकको सेवन गर्ने लत झै हुन्छ । तर पाचन प्रणालीका लागी यो सबैभन्दा हानिकारक मानिन्छ । साथै बजारमा पाइने फास्टफूडको सेवन पनि पाचन प्रणालीका लागी लाभदायक मानिदैन । यसले हाम्रो शरीरमा नराम्रो कोलोस्टोरको मात्रा बढाउँनुका साथै वोसो समेत बढाउँछ ।
३. स्वाद लिएर खाने
कुनै पनि खानाको आआफ्नो स्वाद वा विशेषता हुने गर्दछ । तर खाना खाएको बेला यसको स्वादको मिठास लिन सकिएन भने यसबाट प्राप्त हुने आवश्यक मात्राको पौष्टिक सहित खानेकुराको मात्रा समेत असमान हुन्छ । जसले पाचन प्रणाली बिर्गान सक्छ ।
४. अन्यत्र भुलेर नखाने
कहिले काहिँ हामी अन्यत्र भुलेर वा काम गर्दै खादाँ हामी अत्यधिक मात्रामा खानेकुरा खाने गर्दछौ । जसलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ टेलिभिजन हेर्दै, गित सुन्दै वा भलाकुसारी गर्दै खानु हुदैन । यसले हाम्रो पाचन क्षमतामा हानि पार्दछ ।
५. अत्यधिक नखाने
केहि मानिसमा जुनसुकै समयमा जति भए पनि खाने बानि हुन्छ । भर्खर खाना खाएको मानिसले पनि कतै भोज वा भत्तेर भेटेमा फेरी खाने गर्दछन् । सबैमा यो बानि लागु नहुन सक्छ । तर यस्तो बानि छ भने यसलाई तत्काल छाड्नु पर्दछ ।
६. सहि समयमा भोजन
पाचन प्रत्रृmया दुरुस्त राख्न सहि समयमा भोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै नियमित दिनचर्याको समेत पालना गर्नुपर्दछ । अर्थात विहानको खाजा, खाना, दिउँसोको खाजा र बेलुकीको खाना समयमा खानु पर्दछ । सकेसम्म बिहान ८ बजे अगावै खाजा खाने, ११ बजे भित्र खाना खाने, दिउँसो २ बजे खाजा खाने र साझँ ५ बजे हल्का फल खाएर बेलुकीको खाना ८ बजे भित्र खाइसक्नु पर्छ । यसो गर्नाले शरीरको पाचन प्रणाली तन्दरुस्त रहन्छ ।
प्रकाशित मिति २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०६:३८